कोरोनालाई “चाईनिज भाईरस” संज्ञा दिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अस्पताल भर्ना,के भन्नुहुन्छ नी? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
कोरोनालाई “चाईनिज भाईरस” संज्ञा दिने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अस्पताल भर्ना,के भन्नुहुन्छ नी?
बीबीसी। को’रोना पो’जेटिभ देखिएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई अस्पताल लगिएको छ। ह्वाइट हाउनसले विज्ञप्ति जारी गर्दै सावधानी र होसियारी अपनाउँदै राष्ट्रपति ट्रम्पलाई वाल्टल रीड नेशनल मिलिट्री अस्पताल लैजाने निर्णय गरिएको जनाएको छ।
त्यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीट गर्दै आफू र आफ्नी श्रीमतीलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिएका थिए। ह्वाउट हाउसले सू’चना जारी गर्दै ट्रम्पलाई थकान महशुस भएको र उनी चाँडै निको हुनेमा आशावादी रहेको जनाएको छ।सी’बीएस न्युज’का अनुसार ट्रम्पलाई हल्का ज्वरो आएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्प विशेष हेलिकप्टर मरीन वनबाट मेडिकल सेन्टर प्रस्थान गरेका थिए। तर प्रस्थान गर्नुपूर्व ट्रम्पले आफू र आफ्नी श्रीमतीप्रति शुभकमना दिनेलाई धन्यवाद दिएका थिए। ट्रम्पलाई कोरोना पोजेटिभ पुष्टि त्यतिबेला भएको छ।
जतिबेला अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव हुन एक महिना मात्र बाँकी रहेको छ। ट्रम्प’को प्रतिश्पर्धा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार जो बाइडेनसँग हुँदैछ।अस्पताल जानु पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले जनताका ला’गि एउटा भिडियो सन्देश जारी गरे अनि उनी हेलिकप्टरमा बसे। उनले मास्क लगाएका थिए। ट्रम्प’ले जारी गरेको भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, ‘म सबैलाई सह’योगप्रति धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
Previous लकडाउनबाट मुक्त हुन १ वर्ष लाग्न सक्छः इजरायली प्रधानमन्त्री,अनि तपाईं के भन्नुहुन्छ नी?
Next पुरा भयो केपी ओलीको बोली, हावाबाट बिजुली बलेपछी स्थानीयमा खुशियाली,उखान हैन वास्तविक रहेछ परे सबै दंग।
“बस दुर्घटना: २७ को, मृ’त्यु, कैयौँ घा’इते”
“ढुंगा, गिट्टी र बालुवा, निकासी,गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश,